Faith, Hope & Prayer: January 2009
What Does God Know about You? (Part 3)
Our God Does Not Grow on Trees
Over the last two days we have looked at God’s omniscience – that he knows everything, specifically everything about you and your life. We have been examining God’s presence in your life by breaking it down into five areas. Today we’ll look at the final two.
God knows your fears. God knows everything that gets you stressed out. For instance, many of us today are concerned about the economy, and so we have financial fears.
The truth is God is aware of all your needs. Prayer is never giving information to God. The Bible says, “… Your Father knows what you need before you ask him” (Matthew 6:8 NIV). He’s aware of every single need you have: financial needs, spiritual needs, sexual needs, social needs, emotional needs.
God knows your faithfulness. Here’s another benefit from the truth that God knows everything: He sees everything you do that is good and right. Every time you choose not to sin, every time you resist temptation, every time you takeastand because of God’s Truth, he sees your faithfulness to him.
Posted by လားရှိုးသူ at 6:01 AM0comments
Posted by လားရှိုးသူ at 6:32 AM0comments
Because God knows our frustrations and despair, we can give those feelings to him: “Give all your worries and cares to God, for he cares about what happens to you” (1 Peter 5:7 NLT). Cast them all permanently on God, once and for all. Don’t take them back......Rick Warren
Posted by လားရှိုးသူ at 11:37 AM 1 comments
He causes the sun to rise on good people and on evil people, and he sends rain to those who do right and to those who do wrong.
Matthew 5:45 (NCV)
Posted by လားရှိုးသူ at 5:15 PM0comments
“If you ask me, I will give you the nations; all the people on earth will be yours.”
Psalm 2:8, NCV
Posted by လားရှိုးသူ at 7:28 AM0comments
Romans 2:14 (NLT)
Tomorrow we will look at how we are also led to the truth through careful consideration.
Posted by လားရှိုးသူ at 10:28 AM0comments
Psalm 1:3 (NJB)
Posted by လားရှိုးသူ at 8:32 AM0comments
He burns part of the tree to roast his meat … Then he takes what’s left and makes his god.
Isaiah 44:16-17 (NLT)
In 1980, Howard Cosell interrupteda“Monday Night Football” game with the announcement that John Lennon, of the Beatles, had been murdered outside his New York City apartment.
In an eerie moment, ABC Sports respectfully cut sound from the game just asaplay broke on the field, leaving television viewers – numbed by the news – sitting in silence while fans at the game, unaware of Lennon’s death, cheered wildly.
As I grieved,aBible verse floated into my mind: “For what will it profitaman if he gains the whole world, and loses his own soul?” (Mark 8:36 NKJV).
I’d like to tell you that I fell to my knees and forever turned from my prodigal path, but, in my arrogance, I continued to wanderalong and winding road to the Truth.
The prophet Isaiah spoke about men who used wood to fashionagod – one unable to deliver them – and so, by their own hands, they doomed themselves.
Our objective-in-Jesus is to rid ourselves of any gods we’ve fashioned from our own hands and to serve the one true God.
Posted by လားရှိုးသူ at 11:37 AM0comments
The first suggests an abandonment to love: “God, I’m in this relationship head-to-toe, no matter where it leads.”
The second suggests tentativeness: “Gee, I hope I can love you God.”
We expressadesire to deepen our relationship with God and there he stands in the deep end calling us to jump in and join him. There we stand, testing the living water with our toes, hesitating to take the plunge that would requireafully immersed abandonment to God.
The thing is this: The only thing stopping you fromadeep, abiding relationship with God is … you.
Our objective-in-Jesus is to fall hopelessly in love with God. Ask yourself what hinders you fromadeeper relationship with God, and ask God to remove any obstacles that are in the way.
Posted by လားရှိုးသူ at 7:57 AM0comments
For in Christ all the fullness of the Deity lives in bodily form, and you have been given fullness in Christ ….
Posted by လားရှိုးသူ at 11:30 AM0comments
I am ready now; I am willing now to be swept under the safety of your wings, asahen gathers her chicks (Matthew 23:37 NKJV).
Posted by လားရှိုးသူ at 8:12 AM0comments
“ For everyone who asks receives ; he who seeks finds ; and to him who knocks , the door will be opened ”
Spiritual growth is not automatic even for people who have opened their hearts to Christ. The writer of Hebrews sadly noted, “You have been believers so long now that you ought to be teaching others. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God’s word.”
ဖြောင့်မတ်သောသူသည် စွန်ပလွံပင် ကဲ့သို့ ပွင့်လန်း၍ လေဗနုန်တောင်ပေါ်မှာ အာရဇ်ပင်ကဲ့သို့ ကြီးပွားလိမ့်မည်။
ဆာလံကျမ်း ၉၂း၁၂
လေပြင်းမုန်တိုင်းထန်သော်လည်း မကျိုး၊ ကျေ မပျက်ဆီးတတ်သော စွန်ပလွံပင်ကို တွေ့မြင်ဘူးကြသုများ သိကြမှာ။ လေပြင်းဒဏ်ကြောင့် ကိုင်းညွတ်ပြီး မြေပြင်နှင့် ထိလုမတတ် ကိုင်းညွတ်သွားသော်လည်း၊ လေငြိမ်သော အချိန်၌ ပြန်လည် ထောင်မတ်၊ ကြီးထွားလာသောအကြောင်း၊ ကျမတို့ မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။ စွန်ပလွံပင်၏ လှို့ဝှက်ချက်ကတော့၊ လေပြင်းရဲ့ဒဏ်ကြောင့် ကြီးထွားနှုန်း ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထာဝရဘုရားသခင် ကျမတို့ကို စွန်ပလွံပင်နှင့် ပုံပမာ ပေးခြင်းကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ ဘဝရဲ့ အသက်တာမှာ အခက်အခဲ၊ ဒုက္ခ၊ ကြမ်းတမ်းမှု့ ပေါင်းကို ကြုံရမှာ ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ဘဲ ဘဝရဲ့ လှိုင်းဒဏ်ကြီးမားပါစေ၊ ကျမတို့ဟာ အသက်တာသစ်၊ ရင့်ကျက်၊ ကောင်းမွန်လာမှာ ဖြစ်ကြောင်းကို ပုံပမာ ပြောချင်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အရာဘဲဖြစ်ဖြစ် သင့်ရဲ့ တိုးတက်မှု့ကို အနှောက်အယှက်၊ အဟန့်အတားဖြစ်စေနေသလို ဖြစ်နေသော်ငြားလည်း စိတ်ဓာတ်မကျဘဲ၊ ထာဝရဘုရားပေးသနားတော်မူတော်၊ ကျေးဇူးတော်၊ ဆုကျေးဇူးများကို လက်ခံယူကြပါစို့။
ဆုတောင်းချက်။ ။ ကျမတို့၏ အသက်တာကို ခိုင်မာ၊ ရင့်ကျက်၊ ကောင်းမွန်လာစေသော်ကြောင့် ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွန်းပါ၏။ အာမင်။
Posted by လားရှိုးသူ at 7:11 AM0comments
ထိုသို့ဖြစ်၍၊ ငါလက်တင်သောအားဖြင့်၊ သင်၌ဘုရားသခင် ပေးတော်မူသောဆုကို နှိုးဆော်မည် အကြောင်း၊ ငါသည်သင့်ကို သတိပေး၏။
တိမောသေသြဝါဒစာ ဒုတိယစောင် ၁း၆
သင်၏ဘဝအသက်တာမှာ ရည်မှန်းချက်၊ ပန်းတိုင်များရောက်ရှိဖို့ ခွန်အားတွေ ပျောက်ဆုံးခြင်း တွေ့ကြုံနေရပါသလား၊ ဘဝရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှု့တွေကြား၊ လမ်းပျောက်နေပါသလား။ အသက်တာတခုလုံးတွက် ထာဝရဘုရားသခင် ပေးသနားတော်မူသောပြင်ဆင်ပေးပြီးသော ဆုလာဘ်များကို ပြန်လည်သတိယ၊ နှိုးဆော်ယူဖို့ အချိန်တန်ပြီ။ သင့်ဘဝတွက် ဘုရားရှင်ပေးသနားတော်မူသော ဆိုလောဘ်တွေကို ဖျက်ဆီး၊ နုတ်ယူဖို့ ဘယ်အရာကမှ မတတ်နိုင်ပါဘူး၊ ကျမတို့ကိုယ်တိုင် က ပြန်လည်နှိုးဆော်ယူဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့ နုတ်ကပတ်တော်တွေကို နှလုံးသွင်း၍ ဘုရားရှင်ထံ ချဉ်းကပ်ပါ။ နေ့စဉ်အသက်တာကို ကိုယ်တော်လက်အပ်နှံလျက် အသက်ရှင်ပါ။
ဘုရားရှင်ဖွင့်ထားသော တံခါးကို မြင်နိုင်အောင်ကြည့်ပါ၊ လူ့စိတ်အားဖြင့် ကြံစည်၍ မမှီနိုင်သော ဆုကျေးဇူးတော်တွေ အချိန်ကျ ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ရဲ့ ကိုယ်တော်ပြင်ဆင်ပေးသော် ဆုကျေးဇူး၊ ဆုလောဘ်၊ အလိုဆန္ဒများကို ယုံကြည်ခြင်း၊ ခိုကိုးခြင်းဖြင့် လက်ခံယူကြပါစို့။
ဆုတောင်းချက်။ ။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိသောမူသော ထာဝရဘုရားသခင်၊ ကျမတို့အသက်တာအတွက်၊ အိမ်မက်၊ ဆန္ဒ၊ ဆုကျေးဇူးတော်တွေကို ပေးသနားတော်မူသောကြောင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ၏။ ကျမတို့ စိတ်နှလုံးကို နှိုးဆော်လျက်၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လက်ခံယူနိုင်မည့်အကြောင်း မစတော်မူပါဘုရား၊ သခင်ယေရှု၏ မြတ်သောနာမ၌ ဆုတောင်းပါ၏။ အာမင်။
Posted by လားရှိုးသူ at 6:59 AM0comments
2. Better health. Unrelenting stress harms our bodies. We all know that, yet we let it continue day after day after day. Many times we only build margin in our lives after the heart attack almost happens or does happen, or the blood pressure skyrockets. Why do we wait until our health plummets before we make this decision? Why not realize that we need to build some margin in to our lives now? The truth is your body needs downtime in order to heal. Race cars make pit stops occasionally in order to get repaired. You can’t fix anything going 200 miles an hour. Yet, we try to repair ourselves while we’re still racing through life. Margin builds in time for better health.
You don’t have to live on overload. You don’t have to live in survival mode. Begin today to buildabuffer around your schedule. Then enjoy the benefits of margin and see what God does next! ...Rick Warren
လူပျိုတို့သည် မော၍ပင်ပန်းခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ လုလင်တို့သည်လည်း ထိမိ၍လဲကြ လိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရားကို မြော်လင့်သောသူတို့မူကား၊ အားပြည့်ကြလိမ့်မည်။ ရွှေလင်းတကဲ့သို့ မိမိတို့ အတောင်ကို အသစ်ပြုပြင်ကြလိမ့်မည်။ ပြေးသော်လည်း မပင်ပန်း၊ ခရီးသွားသောအခါ မမောရကြ။ ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း ၄၀း၃၀-၃၁
ကျမတို့ အယောက်ဆီတိုင်း နေ့စဉ်အသက်တာကြား၊ ဖိအားပေးမှု့၊ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှု့မျိုးစုံတို့ကို ခံစားရ၊ ပိနေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကျမ်းပိုဒ်လေးကို အမှတ်ယ စေချင်ပါတယ်။ ကျမတို့ဟာ ငွေကြေး၊ အလုပ်ကောင်းရဖို့၊ ကျမတို့ရဲ့ လူလူခြင်းဆက်ဆံခြင်း၊ ချစ်သူခြင်း၊ မိဘ၊ မောင်နှမဆက်ဆံရေး ပိုမိုပြေပြစ် ကောင်းမွန်လာဖို့၊ စတော့တွေ ကောင်းလာဖို့ ဒီလောက်ကိုဘဲ စောင့်စားနေတတ်ကြတယ်။ ယနေ့ဟာသင့်ရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းကို တခြားသောအရာများ၌ ထားရှိခြင်းထက်၊ သင့်ကိုအမြဲကူညီစောင်မ ကြည့်ရှုပြီး၊ ထာဝရသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပေးသနားတော်မူ၍၊ အရာရာကို တတ်နိုင်စွမ်းသော၊ ထာဝရဘုရားသခင်၊ သခင်ယေရှုထံ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့် အသက်တာကို အကောင်းဆုံးပြုပြင် ကြပါစို့။
ကျမတို့၏ မျှော်လင့်ချက်များကို ယေရှုခရစ်တော် ထံမှ သွေဖယ်ဖို့၊ ကျမတို့ရှိနေတဲ့၊ ဖြစ်နေတဲ့အရာကို ဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ ဖျားယောင်းသွေးဆောင်မှု့များကို ရှောင်ကွင်းနိုင်ပြီး၊ ထာဝရဘုရားသခင် ပေးသနားတော်မူသော်၊ အောင်မြင်ခြင်း၊ ပန်းတိုင်ကိုလက်လှမ်း ယူနိုင်ဖို့ ကျမတို့ရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်း လမ်းကြောင်းကို ထာဝရဘုရားသခင်ထံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ကြပါစို့။
ဆုတောင်းချက်။ ။ ထာဝရဘုရား၊ ကျမတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကို ကိုယ်တော်ထံပါး ပို့ဆောင်ပေးသနား တော်မူသောကြောင့် ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကို ချီးမွမ်းပါ၏။ ကျမတို့အတွက် အကောင်းဆုံးအရာ၊ ပန်းတိုင်၊ ပြင်ဆင်ထားပေးကြောင်း ယုံကြည်ပါ၏။ ယေရှုခရစ်၏ အမည်နာမကို အမှီပြု၍ တောင်းလျှောက်ပါ၏။ အာမင်။
Posted by လားရှိုးသူ at 6:52 AM 1 comments
God, listen to me shout, bend an ear to my prayer… You’ve always given me breathing room,aplace to get away from it all.
Psalm 61:1,3(MSG)
Tomorrow we’ll look at four benefits of building margin into our lives.. ...Rick Warren
Posted by လားရှိုးသူ at 5:04 AM0comments
“ ထိုရူပါရုံသည် ချိန်းချက်သော အချိန် နှင့် ဆိုင်၍ အမှု ကုန်ရသော ကာလ ကို ဆို လို၏။ မုသာ နှင့် ကင်းလွတ်၏။ ဆိုင်းသော်လည်း မြော်လင့်လော့။ နောက်မကျဘဲ ဧကန်အမှန် ရောက်လိမ့်မည်။ ဟဗက္ကုတ် အနာဂတ္တိကျမ်း ၂း၃ ”
ထာဝရဘုရားသခင်သည် အကောင်းဆုံး အမွန်မြတ်ဆုံး သော် မျိုးစေ့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးသား၊ ဘဝတခုလုံး၌ ကျဲ၊ စိုက်ပျိုးထားပါ၏။ ကျမတို့သည် အတိတ်၌ မခံနိုင်သော စုံစမ်းနှောက်ယှက်မှု့၊ ခါးသီးသော ဘဝဒဏ်၊ အဖြစ်ဆိုးများကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသောသူများလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်၊ သို့သော် ကျမတို့ ဖြစ်နေရာ၊ တည်ရှိနေသော အခြေအနေများသည်၊ ဘုရားရှင်စီစဉ်မှု့ တခုလည်း ဖြစ်နိုင်ပါ၏။ ကျမတို့ အတိတ်မှ ဖြစ်ရပ်များအားလုံးသည်၊ အကောင်းဆုံး၊ အမြင့်ဆုံး တနေရာသို့ တွန်းပို့ပေးမည့် ဘုရားရှင်၏ အကြံအစဉ်တော်များ ဖြစ်ကြောင်းကို နားလည်ထားနိုင်ဖို့သည် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါ၏။
သင့်၏အတိတ်သည်၊ အနုတ်လက္ခဏာများနှင့် ပြည့်ဝခဲ့ခြင်းသည်၊ အနာဂတ်၌် မိမိဥဏ်ရည်နှင့် မမှီနိုင်အောင်၊ ကြီးကျယ်ခမ်းနား၊ ထွန်းလင်းနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထာဝရဘုရားသခင် ပေးသော်အကောင်းဆုံးဆုကျေးဇူး များကို လက်ခံရရှိဖို့၊ သင့်ခြေလှမ်းများကို တချက်ရှေ့ဆက်ဖို့၊ အချိန်ကျရောက်ပါပြီ။ သင့်စိတ်ကူး၊ အိမ်မက် များလက်လွတ်ခဲ့သလား၊ ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးသော်ဌားလည်း၊ အချိန်ကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ စိတ်ပျက် ညည်းညူခြင်းကြောင့် သော်လည်းကောင်း စောင့်ဆိုင်း၊ လက်လွတ်ခဲ့ရပါသလား။
ယနေ့သည် သင့်အိမ်မက်များကို အသစ်တဖန် အသက်သွင်း၍ ယုံကြည်ခြင်းကို၊ နှလုံးသား၌၊ ပြန်လည်ရှင်သန် စတင်ရမည့် အချိန်ဖြစ်ပါ၏။ သင့်ဘဝ၌ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာက ဘာတွေဖြစ်လာအုံးမယ်ဆိုတာလောက် အရေးကြီးခြင်းမရှိဘူး ဆိုတာကို အမှတ်ယစေချင်ပါတယ်။ ထိုအချိန်၌ သင်သည် စိတ်၏ကျန်းမာခြင်း၊ လူ၏ချမ်းသာခြင်းများ အရင်အချိန်ကထက် ပို၍ ခိုင်မာ၊ ရင့်ကျက် လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် မိမိ၏ ခြေလှမ်းများကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့၊ ရှေ့သို့ချီလျှက်၊ ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးသော်၊ ပန်းတိုင်၊ ဆုကျေးဇူးများကို လက်ခံယူဖို့၊ ယနေ့သည် သင့်၏နေ့၊ အချိန်ကျရောက်ပြီ၊ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်၊ ရှေ့သိုချီ လက်ကမ်းကြပါစို့။
ဆုတောင်းချက်။ ။ အိုထာဝရ မြတ်စွာသောဘုရားသခင် ကျမတို့အတွက်ပန်းတိုင်၊ အနာဂတ်ကို နှလုံးသွင်းပေးသနား သော်မူသော်ကြောင့်၊ ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းပါ၏။ ကျမတို့ကို ယုံကြည်ခြင်းကို မြဲမြဲ လက်ကိုင်ထားလျှက်၊ ကိုယ်တော်ရှင်ဘုရား ပေးသနားတော်မူသော ဆုကျေးဇူးများကို လက်ခံယူဖို့၊ ဝိညာဉ်တော် ခွန်အား၊ ဆုကျေးဇူး၊ ပေးသနားတော်မူပါဘုရား၊ ယေရူနာမ၌ ရိုသေစွာတောင်းလျှောက်ပါ၏။ အာမင်။